USantiago Posteguillo, "umlawuli" wenoveli yezembali | Uncwadi lwangoku
USantiago Posteguillo, «umlawuli» wenoveli yezembali
UAlex Martinez | | Ababhali, Inoveli
Ifoto ngu-Santiago Posteguillo.
Incwadana yembali ingaphezulu kwangoku kwimeko yangoku yokubhala. Awunakuyikhanyela loo nto Olu hlobo lolunye lolona lufundwayo kwilizwe lethu. Ngale ndlela, phakathi Los athengisa ngokwaziwa ngakumbi sinokufumana imisebenzi engapheliyo esivumela ukuba sihambele ixesha elidlulileyo, ngokungathi yayilixesha lokuhamba ngenqanawa, kwaye sonwabele ukutyeba kolwazi lwethu lwembali ngendlela eyonwabisayo neyonwabisayo.
Kwilizwe lethu sinababhali abakhulu abazinzileyo kolu hlobo kwaye ngokuqinisekileyo baba sisinxibelelanisi salo. Ngapha koko, kuzo zonke, Ndingathanda ukuqaqambisa ukuba ngubani endicinga ukuba "bayeke" ababhali bethu, "umlawuli" oyinyani wesizwe ngokubhekisele kwinoveli yembali.
Ndiyathetha, ewe, malunga USantiago Posteguillo kunye neetrilogies zakhe ezimbini ezinikezelwe kuPublio Cornelio Escipión naseTrajano. Aba bantu, babaluleke kakhulu kwimbali yendalo iphela kwaye ngaphezulu kwako konke, kwimbali yaseRoma.
Abo bethu banomdla kwimbali nayo yonke into enxulumene neRoma yamandulo banethuba elinokungenasiphelo semisebenzi ebhaliweyo enxulumene nale meko yezembali. UBen Kane, Massimiliano Colombo, uSteven Saylor okanye uSimon Scarrow, umzekelo, isampulu yababhali abakhulu ababhale iinoveli eziqulathwe kweli xesha lembali kwaye, njengombhali esithetha ngaye, Ndingathanda ukubacebisa kwaye ndibaxabise ngokuqinisekileyo.
Nangona kunjalo, into endiyithandayo isenguSantiago Posteguillo kuba ii-trilogies zakhe ezimbini zibonakala ngathi zingumsebenzi wobugcisa kwinqanaba elilandisayo nelimbali. Into ethi, xa kufikwa kumxholo weRoma uqobo, akukho lula ukuyifumana phakathi kwababhali belizwe. Mhlawumbi kwakhona, ngokuqinisekileyo, Le nto yokuba engumbhali waseSpain iyanceda, kwimeko yam, ukumthatha njengomnye wababhali ababalaseleyo endikhe ndanomdla wokufunda kuye kwaye bawunikele umsebenzi wabo kwinoveli ebhalwe kwilizwe lamaRoma.
Iincwadi ezintathu ze-trilogy ezinikezelwe kuPublio Cornelio Escipión.
Ubungqina boku linani lamabhaso kunye nokuqondwa okuqokelelweyo ngumbhali kule minyaka idlulileyo. Kula mabhaso kunye nokuqondwa, umzekelo, ukuba kumjikelo wokugqibela wama-2008 weSixeko saseZaragoza Ibhaso laMazwe ngaMazwe leMbali yeMbali nge Imikhosi eqalekisiweyo. Yiba yeyona Novelist yeMbali ilungileyo u-Hislibris ka-2009 Ukungcatshwa kweRoma, I-Cartagena yeMbali yeNoveli yeVeki yeMbasa ye-2010 okanye yeMbali yoNcwadi lweMbali ka-2013, phakathi kwabanye.
Konke oku kuqaphela kusekwe, ngokuyinxenye, kwinto yokuba umbhali waseValencian eneencwadi zakhe ukwazile ukunika umfundi ithuba lokuba azibonele ngokwakhe ubuntu kunye nembali yoluhlu lwamanani abaliweyo ngenxa yamaxwebhu amangalisayo ujikeleze yonke imihla, ezopolitiko okanye ezomkhosi indlela yobomi kwiriphabliki yomkhosi waseRoma.
Kwangelo xesha, indlela yakhe yokubhala ivumela abafundi abangatsaleleki kufundo lwembali kuye ngokungathandabuzekiyo zibandakanya iyelenqe labalinganiswa beshiya ecaleni imeko eyenzeka kuyo, ekugqibeleni kwaye ngokuqinisekileyo, bagqibe ukuba ngamakhoboka kwimbali yaseRoma kunye nesifundo sakhe ngaphandle kokuqonda oko.
Iincwadi ezizezithathu ezinikezelwe kuTrajan.
Kwelinye icala, ewe, bonke abo bafundi baziva benomdla kwimbali kunye nokufunda kwayo, baya kubona emsebenzini kaSantiago Posteguillo ubunzima obunokulingana kunye nethuba elifanelekileyo lokuqhubeka nokumangalisa kwimbali yaseRoma, Ukudibanisa nokwandisa ulwazi lwabo kwaye bonwabele ubuqhophololo bezopolitiko nezentlalo obabuphawula amaxesha achazwe ngumbhali.
Ngesi sizathu, ndizama ukuqaphela ezi trilogies zimbini zeSantiago Posteguillo njengezona ncwadana zembali zibalaseleyo zinxulumene neRoma yamandulo kunye nombhali wayo njengombhali obalaseleyo kolu hlobo. Ngaphandle koku, kwaye njengesiqhelo, isengumbono wam othobekileyo kwaye Ndikhuthaza abalandeli bethu be-Actualidad Literatura ukuba baphakamise, ngohlobo lwezimvo, ezabo iincwadana ezinikezelwe kwiRoma yakudala nakwihlabathi lakhe liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » USantiago Posteguillo, «umlawuli» wenoveli yezembali
UAlex Martinez sitsho
Ndiyabulela kakhulu ngamazwi akho kwaye ndonwabile ukuba sabelana ngezinto ezifanayo kunye nokubonakala ngokunxulumene neSantiago Posteguillo. Inyani yile yokuba yenye yezo ncwadi uzigcina zibubuncwane. Eligqwesileyo inqaku lakho kwezi trilogies. Siza kuthetha ngalo mbandela ngokuwola okukhulu.
Phendula kuAlex Martinez
UMariola Diaz-Cano Arevalo sitsho
Njengobutyebi obukhulu kakhulu, ngokwenene. Ndiyidlalile i-Scipio trilogy yonke ngaxeshanye, nangona bendikhe ndayifunda iTrajan ngaphambili, endiyithanda ngcono. Kwaye ndinazo njengegolide kwilaphu.
Ngokuqinisekileyo siya kuqhubeka nokuthetha. Ah, ndiyabona ukuba umbhali wakho oyintloko nguPérez-Reverte. Ewe, siya kuba nokuninzi esinokuthetha ngako. Ndiqala nje iFalcó. Ndiza kuxela. Enye ihug.
Ukuphendula kumvuzo weNobel woNcwadi, uBob Dylan
Iinqanawa ezibalaseleyo II. Ngeebhotile zerum